रेखा थापाको १० दिने कठोर ध्यान के का लागि ? - Saptakoshionline
रेखा थापाको १० दिने कठोर ध्यान के का लागि ?
प्रकाशित मिति: बुधबार, भाद्र १७, २०७७ समय: ९:५१:०२
ईटहरीर गएको बैशाखबाट अभिनेत्री रेखा थापा नयाँ चलचित्रको छायांकन थाल्ने तयारीमा थिइन् । तर, कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले लकडाउन घोषणा गरेपछि चलचित्रको छायांकन सुरु हुन सकेन । सविर श्रेष्ठले निर्देशन गर्ने चलचित्रमा उनको जोडीको रुपमा अभिनेता सौगात मल्ल देखिँदैछन् । अब दशैंअघि चलचित्रको छायांकन सुरु हुने सम्भावना न्यून छ ।
लकडाउनको समयमा रेखाले चलचित्रका लागि आफ्नो शरीर स्लिम बनाएकी छन् । व्यायाम गर्न थालेको केही महिनामा २० केजी तौल घटाएकी उनले ५,७ वर्ष खानामा ध्यान नदिएका कारण मोटाएको बताउने गरेकी थिइन् । अब भने उनले आफ्नो शरीरलाई ब्यालेन्समा ल्याइसकेकी छन् । जिमखाना बन्द भएपछि उनले आफू बस्ने अपार्टमेन्टको कम्पाउन्डमा व्यायाम गर्दै आएकी छन् ।
यसबीच, रेखा मंगलवारबाट कठोर ध्यानमा बसेकी छन् । उनी दश दिने मौन व्रत बसेकी हुन् । यो समयमा उनले मोबाइल चलाउन पाउने छैनन् र दिनमा एक पटक मात्र खाना खानेछिन् । साथै, उनले दैनिक १७ घण्टासम्म साधना गर्नुपर्ने छ । मनलाई एकाग्र बनाउन, मनभित्रका लोभ(मोह हटाउन, शरीरलाई सकारात्मक उर्जा प्रदान गर्न उनी ‘विपश्यना’ ध्यानमा बसेकी हुन् ।